ह्यार्री केन बेच्न स्पर्सले माग्यो रियललाइ ३५० मिलियन !! केन बन्दै संसारकै महँगो ट्रान्सफर - Experience Best News from Nepal
ह्यार्री केन बेच्न स्पर्सले माग्यो रियललाइ ३५० मिलियन !! केन बन्दै संसारकै महँगो ट्रान्सफर
स्पेनिस क्लब रियल मद्रिडमा जितको केहि खडेरीपनले गाब्दै गरेको अवस्थामा इंग्लिश प्रिमिएर लिगका स्टार ह्यारी केन प्रति नजर लगाउदै गरेको र संसार कै उच्च मोलमा भित्र्याउने अफबाह अनलाइनमा यत्रतत्र छरिएको भेटिन्छ। ३५० मिलियन यूरोमा रियलले केनलाइ अनुबन्धित गराउन लागेको भन्दै आज अनलाइनमा तात्तातो समाचार फैलिरहेको छ, बार्सिलोनाबाट नेय्मार २२२ मिलियन यूरोमा लिग-१ पी.एसजी प्रवेश गरेका थिए। नेय्मारको डरलाइ पछाडी छाडी केनको मूल्य बढाएर नया रेकर्ड कायम गर्न लागेको भन्दै समाचार छापिएको छ।
साथै रियलले केन एक उत्कृस्ट खेलाडी साथै संसारका टप स्टाइकरको हैसियतमा उनको स्थान उच्च रहेको भन्दै उनलाई रियलमा अनुबन्धित गर्न मिल्ने क्लबको दाबी रहेको सार्बजनिक गरिएको छ। रियल मार्फत रोनाल्डो इटाली जानुले क्लबले निकै समस्या झेलेको छ, क्लबमा राम्रा प्ले मेकरको कमि छैन तापनि क्लबले राम्रो स्टाइकरको कमि भने हमेशा महसुस गर्दै आएको छ। गोलको खडेरी नै देखिएको रियलले केनलाइ अनुबन्धित गर्नु उत्साहजनक मान्न सकिन्छ।
हालसम्म केनले प्रिमिएर लिग अन्तर्गत यो सिजनमा आफ्नो १४ गोल दर्ता गरिसकेका छन् साथै इंगलैंड मार्फत विश्वकपमा गोल्डेन बुट समेत जित्न सफल खेलाडी केनका निम्ति ३५० मिलियन प्राइस ट्याग उचित रहेको क्लबको समेत सहमत रहेको पाइएको छ।
केनको समेत इच्छा स्पेन प्रवेश गर्ने रहेको हुदा ट्रान्सफर विन्डो बन्द हुनु अघि नै समर सिजनका निम्ति केनलाइ रियल अनुबन्धित गर्न रियल लालायित रहेको देखिन्छ। स्पर्सले समेत केनको मूल्यमा अभिब्रिधि गराउदै मूल्य ३५० मिलियन नै रहेकोमा सहमत गर्ने योजनामा पुगेको छ।
मूल्यमा खुशी रियलले केनलाइ ३५० मिलियन खर्चिने पक्ष भने सार्बजनिक भएको छैन्।
के रियल मद्रिडले ३५० मिलियन खर्चिदै संसारको महँगो ट्रान्सफरमा सम्झौता गर्ला ??
पौल पोग्बा: मौरिन्हो भन्छन पोग्बा वेस्ट ह्याम विरुद्ध खेल्ने छन्- क्लब भन्दा ठुलो कोइ खेलाडी हुदैनन्!!
प्रिमिएर लिगको दोस्रो खेलमा बिजयी टिम सबैलाई क्लिन सिट!! आजको पूर्ण खेल विवरण!!
नर्थ डर्बी अर्सनल विरुद्ध स्पर्स !! खेलमा घटे यी घटनाहरु, जान्नुहोस पूर्ण खेल विवरण
नाटकीय कम ब्याक ड्र खेल्दै युनाइटेड !! अझै गोल अन्तर -१
२०१९ को पहिलो जित र गोल लेस्टरलाई !! भार्डीले गरे गोल
english premier leagueHarry Kane
लोन मै हिगोइन मिलानबाट चेल्सी जादै !!
नेय्मार बार्सिलोना फर्किन नाटकीय प्रयास जारी
चेल्सी स्टार मिडफिल्डर ‘फ्याब्रिगास’ लिग-१ क्लब मोनाकोमा अनुबन्धित
चेल्सीका विलियन भित्र्याउन बार्सिलोनाले लगायो वोली!! विकल्प कसको माल्कम कि डेम्बेले ?
सिरी-ए मा उत्कृस्ट ट्रान्सफर क्रिस्टियानो रोनाल्डो नभई पाइटेक !! आखिर कसरी ?